Teknika fototra hanehoana ny fahaizanao feno amin'ny fanaovana sary hosodoko | | Famoronana an-tserasera
«Vase misy loko rano» avy amin'i Aracelyasmine dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Mpandoko hosodoko maro nandritra ny tantara no nitaona ny zavakanto loko mandoko. Ary io, ity teknika ity, afaka mamorona sanganasa kanto mora foanaIzy io dia fitaovana misy fahafaha-mamorona lehibe.
Fa inona no anaovana azy? Ny watercolor dia misy pigment, binder kely (izay mazàna matetika), ary mahia kokoa (rano). Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny firafitr'ireo sary hosodoko samihafa ianao dia aza adino ity lahatsoratra teo aloha ity.
Ny antonony tsara indrindra hanombohana hoso-doko amin'ny loko rano dia ny taratasy. Misy karazan-taratasy maro karazana, ny zava-dehibe dia ny ahafahany mandray rano tsara, noho izany dia tsy maintsy misy ny fiteny avo lenta, manomboka amin'ny 190 grama. Arakaraka ny maha avo ny grammage no hanohanany ny rano. Ho fanampin'izany, miankina amin'ny endriny dia misy karazany telo ny taratasy mety:
Taratasy voatsindry mangatsiaka: manome firafitra be dia be satria somary marokoroko.
Taratasy voahidy mafana: faritra mafy sy malama, izay mahatonga ny watercolor ho malama foana.
Taratasy henjana: misy granulazy lehibe, mahazo endrika misolelaka rehefa mametraka ny loko.
Miankina amin'ny zavatra tianao hamoronana dia tokony hampiasa ny iray na ny iray hafa ianao.
Manaraka izany dia ho fantatray ny teknika fototra azonao ampiasaina hanamboarana sary hosodoko mahatalanjona amin'ny fomba tsotra.
1 Sasao fisaka na fisasana fisaka
2 Lena amin'ny maina na lena maina
3 Lena amin'ny lena na lena lena
4 Manasa grady na manasa grady
5 Borosy maina na fanasana maina
6 Fampiasana sira
7 Fampiasana alikaola etil na alikaola manosotra
8 Mampiasa fanjaitra na scraper
9 Fampiasana plastika
Sasao fisaka na fisasana fisaka
«# 71» avy amin'i ViviRibS dia manana lisansa CC BY-NC-SA 2.0
Io no teknika ampiasaina indrindra amin'ny loko rano. Ny zava-misy fotsiny ao anaty ny fanosorana ny borosy anaty rano ary avy eo amin'ny loko hitondrana azy amin'ny taratasy dia fanasana. Tsotra izany Raha te-hamorona vokatra mangarahara kokoa ianao dia tsy maintsy ampidirina rano bebe kokoa ilay borosy. Raha mila loko marokoroko bebe kokoa, dia ampidiro kely kokoa ny rano sy pigment bebe kokoa. Tsy misy farany ny azo atao.
Lena amin'ny maina na lena maina
Voasana aloha ny fisasana fisaka ary, rehefa maina dia asiana sosona hafa, amin'ny fomba famoronana mangarahara, ahafahana mahita ny sosona etsy ambany.
Lena amin'ny lena na lena lena
Manasa lamba fisaka aloha izahay ary, alohan'ny main'ny rano dia maka loko sy loko hafa isika amin'ny fomba izay mihoatra ny kely ihany ilay voalohany. Ny loko dia hifangaro miaraka amin'ny famoronana vokatra tsara tarehy.
Manasa grady na manasa grady
Ity karazana teknika ity dia mampiseho amintsika ny fifindrana avy amin'ny watercolor tototry kokoa ka lasa mamirapiratra kokoa. Mba hanaovana azy tsara dia tsy maintsy maka pigmenta sy rano kely aloha isika, mamorona tsipika amin'ny faran'ny taratasy iray. Taty aoriana dia mihala ny pigment kely sy rano bebe kokoa isika, mamorona tsipika hafa izay manatevin-daharana ilay teo alohany. Samy hitambatra izy roa. Izahay dia miakatra tsikelikely amin'ny pigment sy rano bebe kokoa, ka mamorona effets gradient tsara.
Borosy maina na fanasana maina
Miaraka amin'ny enta-mavesatra faran'izay kely (maina ny borosy) ary misy pigment ampy, azontsika atao ny mandoko amin'ny taratasy amin'ny fomba iray hanomezana marika be ny endriny.
Ho hitantsika manaraka izany fitaovana mifameno hafa Azontsika ampiasaina amin'ny loko misy rano.
Ny sira dia miteraka vokatra mahatalanjona amin'ny loko rano. Mba hampiasana azy tsara, dia manasa fisaka aloha isika ary mametraka sira amin'ny fomba miparitaka alohan'ny maina ny loko. Rehefa maina tanteraka dia afaka manaisotra ny sira isika. Ny vokany dia mety amin'ny fanaovana hosodoko, ohatra, izao rehetra izao.
Fampiasana alikaola etil na alikaola manosotra
Ethyl alikaola koa dia miteraka vokatra mahaliana amin'ny loko rano. Miaraka amin'ny fanampian'ny swab dia ampiharintsika amin'ny loko mando (teknika fanasana fisaka) izany. Ny zavatra hitranga dia samy hifanilika ireo singa roa ireo, ka hamorona faritra tsy dia misy fiafarana sy ireo hafa manana loko hafa.
Mampiasa fanjaitra na scraper
Raha mbola lena ny volo-drano dia esorintsika amin'ny fanjaitra na fitaovana hafa afaka mamorona tsipika. Amin'izany no ahafahantsika, ohatra, manoritra ny tsipika ravina zavamaniry.
Amin'ny fampiasana ravina plastika ketrona teo aloha, afaka manome endrika loko hosika amin'ny alàlan'ny fanomezana azy kitika kely isika. Ny plastika dia haka loko avy amin'ny taratasy, ary hamorona vokatra mahaliana.
Ary ianao, inona no andrasanao hanandrana ireo teknika rehetra ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Teknika fototra hanehoana ny fahaizanao feno amin'ny fandokoana loko watercolor